Archive du 20170816
Mikorontana ny fanjakana Hiova ny governemanta
Hisy fanovana ny mpikamban’ny Governemanta amin’ity herinandro ity raha ny loharanom-baovao iray. Tompon’ny teny farany anefa ny filoham-pirenena, ka asa na hihemotra indray na efa tongotra mby an-dakana ny azy.
Fitakiana ny Iles Eparses Manaitra ny filohampirenena ny ANM
Nandefa taratasy misokatra miantefa any amin’ny filohampirenena ny avy eo anivon’ny ANM na association nosy Malagasy ny sabotsy teo.
TIM Faritra Atsimo Andrefana Niresaka mivantana tamin’i Marc Ravalomanana
Nivory tao amin’ny Magro Toliara ny TIM any amin’ny Faritra Atsimo Andrefana notarihan’ny REG TIM, Sazalahy Tsianihy ary nahitana an’ireo biraon’ny DIS TIM Toliara I,
Hery Rajaonarimampianina Manambitamby ny FJKM
Mila mijoro ny lehilahy kristianina ary ny lohalaharana dia ny fampandrosoana ny fiangonana sy ny firenena, hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina,
Fampihavanana ara-drazana any Nosy varika Olona 8000 no andrasana
Ny sabotsy 19 aogositra izao ao Nosy Varika no hanatanterahana ny antsoina hoe fampihavanana ara-drazana.
Lalatiana Rakotondrazafy Hopotehana amin’ny alalan’ny fitsarana ?
Tsy mbola tapitra hatreo ny adin’i Lalatiana Rakotondrazafy, tompon’ny gazety Free news sy ny filohan’ny antenimierandoholona Honoré Rakotomanana.
Ady tany ao Andranonahoatra Sahirana ny ben’ny tanàna
Tany mirefy 92a72sa21dm2 antsoina hoe « La reunion » TN°11.069-B etsy
“Studio” mitabataba eny Antaninandro Mangataka ny hanakatonana azy ny mponina
Misedra olana tanteraka efa fotoana maromaro izao ireo mponina ao amin’ny fokontany Antaninandro, Boriborintany fahatelo eto Antananarivo.
Fampanoavana Fitsarana ao Mahajanga Razafindrainibe Hanitriniaina Jacqueline no Tonia vaovao
Napetraka tamin’ny fomba ofisialy tao amin’ny Lapan’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany Mahajanga ny sabotsy 12 aogositra 2017 ny Tonian’ny fampanoavana vaovao,
Hitohy ny tsy mbo zah !
Mpanao politika, mpandinika raharaham-pirenena, hatramina olon-tsotra dia efa samy nisy nilaza fa tsy olona no olana eto fa na rafitra na fomba fitantanana.
Honoré Rakotomanana Mila homena lanja ny tanora
Saika tsy nisy valaka tamin’ny nambaran’ny praiminisitra, Solonandrasana Mahafaly tany Fianarantsoa,
Nihorohoro ny tao Ambohitromby Antamponala Jiolahy 20 nanafika tranom-barotra
Nitrangana fanafihan-jiolahy mahery vaika tany amin’ny Fokontany Ambohitromby Antamponala ny 09 Aogositra lasa teo.
Ho raikitra amin’ny 22 aogositra izao ny fihaonan’ny Herin’ny Fanovana, ho tohin’ny dinika natao teny Andrainarivo.